वेश्याको-आत्मकथा | Infomala
जब म ६ वर्षकी थिएँ, त्यतिखेर डेटन सहरमा एउटा चर्चित डेलिशृङ्खला ‘आइ लभ लुसी’ प्रसारण भइरहेको थियो । यस धारावाहिकको प्रमुख पात्र लुसीको म प्रशंसक थिएँ । म ठूली भएपछि लुसीजस्तै निडर, आत्मनिर्भर र अरुभन्दा भिन्नै प्रकारको केटी बन्छु भन्ने सपना पालेकी थिएँ ।
म २६ वर्षकी भइसकेकी थिएँ । मैले आफ्नो भविष्य सुरक्षित पनि पार्नु थियो । आफ्नो भविष्य बनाउन मैले आफ्नो शरीर बेच्ने निर्णय पनि गरें । त्यसरी कमाएको पैसा सदुपयोग गर्ने निर्णय पनि गरें । जब म त्यस पुरुषको कोठामा पुगें, त्यहाँ छm बाहेक अरु कोही थिएन । हामीले आफ्नो काम स्वचालितरुपमा गर्यौं । काम सकेपछि उसले मलाई ७५ डलर दियो, साथै १० डलर इनामस्वरुप दियो । १ घण्टामा आधा हप्ताको तलबबराबरको रकम कमाउन म सफल भएँ ।
ऊ जग्गा दलालीको काम गर्दाेरहेछ । प्रायः स्त्रीको कपडा लगाउँथ्यो । मैले मात्र नभएर एलिनले समेत उसलाई बुझुन सकिरहेकी थिइनन् । उसले सम्पूर्ण शरीर ढाक्ने कपडा लगाउँथ्यो । एक दिन मैले उसलाई तिमी किन यस्तो लुगा लगाउँछौ भनेर सोध्दा उसले आफ्नी भाउजूले यस्तै कपडा लगाउने हुँदा उनकै नककल गरेको कुरा बतायो । जब ऊ ओछ्यानमा गएर सुत्थ्यो, त्यसपछि म निर्वस्त्र भई उसको सामुन्ने उभिन पुग्थें । त्यसपछि ऊ केटीको जस्तो स्वर बनाएर सोध्थ्यो – मैले यो कपडाभित्र के लगाएकी छु भन्ने गर्थै – पहिले तिमी देखाऊ अनि मात्र थाहा पाउन सकिनछ । त्यसपछि ऊ आफ्नो लुगा माथि साथ्र्यो र हस्तमैथुन गर्न सुरु गथ्र्यो र हसतमैथुन गर्न सुरु गथ्र्यौ । उसले रामै्र पारिश्रमिक दिन्थ्यो । एक पटकमा सय डलरसम्म दिन्थ्यो । ऊ हरेक हप्ता आउने गथ्र्यो । यो सिलसिला लामो समयसम्म रहन्थ्यो होला तर उसले दिएको चेक बैंकबाट ब्यालेन्स नभएको भनी पुष्टि भएपछि मैले उसलाई समय दिन छाडिदिएँ ।
उनीहरुले साथीहरु लुटिएका मारिएका र प्रहरीले पक्राउ गरेर लगी यातना दिएका पनि देखिसकेका थिए तर मैले यस्तो केही पनि भोग्नुपरेको थिएन् मलाई यो पेसाबाट उत्पन्न हुने खतरा नै रोमान्टिक लाग्न थालेको थियो । प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ ग्राहकसँग भेट्न जानु नै मेरो गुप्त मिसन थियो।
जन म ग्राहकसँग टेलिफोनबाट वार्ता गर्थे। मलाई मेरो कुराहरु अर्काेतिर टेप गरिदैछ भन्ने शका हुनासाथ कुराकानीको बीतमा पैसालाई ल्याउँदै ल्याउन्नथें । यसबाट पैसको लागि शरीर बेच्ने युवती हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । फेरि मसँग कुराकानी गर्ने पुलिस रहेछ र केस अदालतसम्म पुग्यो भने म मेरो टेपमा भरिएको कुराकानी अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेर भन्न सक्थें– ‘योर अनर, तपाई नै भन्नुहोस् कि यो कुराकानीबाट म वेश्या हुं भन्ने प्रमाणित हुनसक्छ त?’
माइकल अति नै खाइलाग्दा र सुन्दर रहेछन् । कुराकानिका क्रममा मैले उनलाई मनमनै मन पराउन थालें । उनले मलाई उनकी श्रीमतिसँग राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा पनि बताए । यही समयमा उनीसँग शरीर सुम्पेर उनलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई आग्यो । जब हामी सँगै खाना खान थाल्यौं । त्यसपछि मैले आफ्नो प्रेमीसँग भेट्न छोडेको कुरा बताएँ । यो कुरा सुनी उनी निकै हाँस्न थाले । उनको हाँसोलाई चिर्दै मैले भने– ‘म मेरो शरीर तिमीप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु । ’
म हिँडेपछि माइकलको आँखा खुलेछ । ताल्चा मारेको घरपभित्र आफूलाई एक्लै सुतिरहेको पाएपछि उनी बाथरुमको झ्यालबाट निस्केर आफ्नो घरतर्फ लागेछन् । दुई घण्टापछि म घर फर्किदा उनी त्यहाँ थिएनन् । शुरुमा त म आश्चर्यमा परें । पछि उनी झ्यालबाट निस्केर गएको थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले तुरुन्तै माइकललाई फोन गरेर भनें –‘रक्सी खाएर बेहोस भई लड्ने व्यक्तिसँग मेरो व्यवहार चल्न सक्दैन । म फर्केर तिमीसँग फेरि यौनक्रीडा गर्न चाहन्थें तर तिमी भागिसकेका रहेछौ । यदि तिमीलाई भावनात्मक रुपमा पाउन सक्दिन भने म तिमीसँग फोकटमा सुत्न पनि चाहन्नँ । म आफ्नो समय र शारीरिक शक्ति नष्ट गर्न चाहन्नँ ।’
म माइकलको घरमा सुरक्षित थिएँ । त्यो घरमा माइकलबाहेक अरु थपै्र भियतनामी शरणाथीहरु पनि थिए । उनीहरुलाई मप्रति ध्यान दिने फुर्सद नै थिएन । किनकि उनीहरु सबै जना आ–आप्mनै समस्याबाट ग्रस्त थिए । केही दिनपछि म र माइकल मिलेर एउटा अर्को वकिलको खोजीमा गयौं । हन त माइकल नै एउटा सफल र प्रसिद्ध वकिल थिए, तर पनि उनी मेरा प्रेमी थिए । कुनै पनि वकिललाई आफ्नी श्रीमती र प्रेमिकाको पक्षमा वकालत गर्न नपाउने नियम बनाइएको थियो ।
यसै कारणले हामीलाई अर्को वकिलको आवश्यता पर्यो । हामीले खोज्दै जाँदा ब्रुस मोरिस नामको एक प्रसिद्ध बकिललाई भेट्टायौं । उनी एटलान्टा सहरभरिमै नामुद वकिलमा गनिन्थे । मेरा सबै कुरा उनलाई बताएपछि उनले मेरो सम्पूर्ण केस राम्रोसँग नबुझेसम्स अदालतमा हाजिर हुन नपर्ने बताए ।
तर मेरा भाग्य नै खोटो भएर होला, अदालतले मलाई हाजिर नभएको भनी बारेन्ट जारी गर्यो । यसको सूचना पत्रकारहरुले थाहा पाएछन् । उनीहरुले पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमै ‘भगुवाइ डोलार्स फ्रेन्च’ भनेर छापिदिए ।
माइकलका थुपै्र सरकारी साथीहरु थिए । उनीहरुसँग भेट्दा म अलि सावधान हुने गर्थे, किनकि म सहरभरिमै नामुद वेश्यामा परिणत भइसकेकी थिएँ । एक दिन माइकलले उनको साथी स्पिक्सलाई आफ्नी श्रीमती पक्राउमा परेको बताए । स्पिक्सले के कारणले गर्दा भनी साध्दा उनले सबै कुरा बताइदिए । त्यही दिनदेखि स्पिक्स माइकलको घनिष्ट साथीको रुपमा परिणत भएको थियो ।
जबदेखि म माइकलसँग वैवाहिक जीवन बिताउन थालें, त्यो बेलादेखि मैले यस्तो काम गर्न छाडिदिएँ । जब म यस्तो काम गर्दैनथे तब मेरो यो खाली दिमागमा शैतानले डेरा जमाउन पुग्थ्यो । त्यो बेला म धेरै अघिका साथीहरुलाई सम्झिन पुग्थें, जसको साथमा मैले वषौंसम्म काम गरेकी थिएँ । आफ्नो कारमा एक्लै एउटा अपरिचित ग्राहकसँग नौलो ठाउँमा घुम्न जानु कम रोमाञ्चक हुँदैन । संसारका कुनाकाप्चाबाट आएका व्यक्तिहरुसँग बसेर कुराकानी गर्नु र उनीहरुसँग यौनजीवन विताउनु निकै रोमाञ्चकारी र जीवनकै आनन्ददायी क्षण हुने गर्दछ । यस्तो रोमान्टिक क्षणको उपभोग यदि कसैले गर्न पाउँछ भने त्यो हामीजस्ता वेश्याहरुले मात्र हो ।
म खुल्लारुपमा आफूलाई वेश्या भन्न रुचाउँछु । वेश्या अति नै प्राचीन शब्द हो एउटा स्वाभाधिक प्रक्रिया भइसकेको छ कि कुनै पनि जवान स्त्री–पुरुषबीच यौनसम्पर्क हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन । यसकै लागि त देवताले स्त्री र पुरुष रचना गरेका हुन् । आखिर को चाँहदैन र यौनसम्पर्क गर्न ? सेक्स भन्ने कुरा भगबानको पालादेखि चलिआएको बासनात्मक क्रीडा हो ।
म एउटी वेश्या हुँ । आफूलाई वेश्या भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन । मैले जीवनको आधा भाग वेश्या भएर नै जिएकी छु भने आफूलाई वेश्या भन्न के को लाज ?
(यो आत्मकथा एउटी अमेरिकी प्रसिद्ध वेश्याको हो, जसको नाम डोलार्स फ्रेन्च हो । सन् १९९५ मा उनलाई एटलान्टा सहरका अपराधीहरुले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिदिए । पेसेवर अपराधीहरुको शिकार भएकी डोलार्स फ्रेन्चका हत्याराहरु अझै पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।)
Next Postब्रसेल्समा नेपाली स्कुल लोकप्रीय बन्दै
Post category:Blogs / अनुभव / महिला संसार